तीज गीतमा 'गुरु गुँढ रहे चेला चिनी बनी गए' भन्ने उखान चरितार्थ भयो
भद्रगोल शर्मा | Published on 2017-08-23 |
उहिलेका मान्छे बेढङ्गी भएर तीजको मजा लिन जानेनन् । तिनले बनाएका गीतमा उही दुखेसो, गुनासो, आँसुका कुरामात्रै आए ।
हाम्रा बाउ-बाजे, बराजुले त्यही सिके, त्यही जाने । तिनले छोरीचेलीलाई अनेक अर्ती दिए । चेलीबेटीले पनि त्यही सिके । अनि सासुले दु:ख दिएको, श्रीमानले जाँड खाएको, खोलामा बाढी आएको, पेटभरी खान नपाएको मजबुनका गीतबाहेक केही सोचेनन् ।
जे होस् ढिलै भएपनि नयाँ पुस्ताका होनहार मान्छेले तीज गीत कसरी क्लाइमेक्समा पुग्छ भन्ने भेउ पाइसकेका छन् । नत्र यस्ता बबाल गीत कहाँ सिर्जना हुन्थे । यस्ता प्रतिभा कसरी उदाउँथे ।
दुईबीस हिउँद काटिसकेर पनि घर व्यवहारको लेठो झेल्न नपरेकी बिन्दास गायिका कोमल वली पनि शिवजीसँग 'पोइल जान पाम्' भन्ने गुनासो भन्दा पर पुग्न सकेकी थिइनन् । यो सबै बुझेका शिक्षित, ज्ञानी र प्रतिभावान नव गायक/गायिका दर्शकलाई भरपुर मनोरञ्जन दिने ध्याउन्नमा लाग्नु कसरी बेठीक हुन्छ ? राष्ट्रले यसको कदर गरोस् । यी प्रतिभाहरु राष्ट्रका गहना हुन् ।
प्रजापति पराजुली अङ्कलले तीजको गीत छोरी मान्छेले मात्रै गाउने चलनमा 'ब्रेक' दिए । उनले दिदी लिन जाने, ससुराले नपठाउनेसम्मका गीतमा भाका हाले । त्योभन्दा अगाडि बढ्ने 'खुबी' उनमा थिएन सायद ।
'गुरु गुँढ रहे चेला चिनी बनी गए' भन्ने उखान चरितार्थ भयो । उनका पथिकहरुले पराजुलीले गर्न नसकेका काम गरे । यावत विषयमा भाका हालेर राष्ट्रलाई योगदान गरे । गीत संगीतलाई उचाइमा पुर्‍याए ।
गीत भनेको गाउनका लागि हो । गाउने मनोरञ्जनका लागि हो । श्रोता, दर्शकले मजा लिनका लागि हो गीत । त्यसो भए जे गर्दा मजा दिन र लिन सकिन्छ त्यसो किन नगर्ने ? पराजुली बुढाले तीज गीतमा 'ट्याटु'का कुरा गर्न मिल्छ भन्ने कसरी बुझुन् । नयाँ प्रतिभाले तीज गीतमा टुप्पीदेखि पैतालासम्मका 'कम्पोनेन्ट' र पार्टस्'हरु कसरी मिसाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सफल प्रयोग गरे । नपत्याए युट्युब हेर्नुस् । ती गीतको 'भिउअर्स'को संख्याले बताउँछ श्रोताको रुचि के थियो ।
श्रोताको 'इन्ट्रेस्ट' बुझ्न नसक्नेहरुले तीज गीतलाई 'रुन्चे गीत' बनाएर आफुले संस्कृतिको बिँडो थामेको भ्रम पालिरहे । नयाँ कलाकारले श्रोताको रुचि बुझे र बबाल गीत रेकर्ड गरे । चिठी लेख्ने जमानाकै पाराका गीतले 'स्न्याप च्याट' चलाउने पुस्तालाई कसरी चित्त बुझोस् । पछिल्लो समय यो कुरो भेउ पाउनेमात्रै हिट भएका छन् ।
उही पुरानो तरिका, उही चलन, उही शैलीलाई नयाँ पुस्ताले बोकेर हिँड्नु जरुरी छैन । तीज गीतमा विकृति आयो, सिद्धान्त मिलेन, अश्लीलता भयो, पहिरन मिलेन आदि इत्यादि कुरा नेपाली दर्शक/श्रोता के चाहन्छन् भन्ने नबुझ्नेहरुको तर्क हो । कला र कलाकार समयसँगै बदलिने चीज हुन् ।
तीज गीतमा समाजमा भएका सबै विषय उठाउन मिल्छ । मजाले मिल्छ । समाजमा छेडछाड हुन्छ । छड्के कुरा हुन्छ । सबैथोक हुन्छ । यी सबै नेपाली समाजकै कुरा हुन् । न यी गीत मंगल ग्रहका लागि बनाइएको हो, न त विषयवस्तु त्यहाँबाट ल्याइएको हो । लोकमा जे चल्छ, त्यही कुरा लोकगीतमा आउने न हो ।
नेपाली महिलाले अन्डरवेयर लगाउन मिल्छ भने त्यसको गीत गाउन पनि मिल्छ । ट्याटु बनाउन मिल्छ भने त्यसको पनि गीत गाउन मिल्छ । 'मिनिस्कर्ट' लगाउन मिल्छ भने त्यसको पनि गीत बन्नु स्वाभाविक हुन्छ । ती विषयमा गीत बन्दा स्वभावैले तिनको साइज, रङ्ग, ढाँचाका कुरा गीतमा आउँछन् । यति कुरा पनि नबुझ्नेहरुले राष्ट्रका गहनाहरुसँग निहुँ नखोजेकै राम्रो ।
आजका श्रोता/दर्शक बबाल तीज गीत रुचाउँछन् । त्यसैले कलाकारले गीतलाई बबाल बनाएका हुन् भन्ने भद्रगोल शर्माको ठम्याइ छ । अस्तु!